Kungani izidingo zokudla okunempilo zishintsha ngokukhula? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Izidingo zokudla okunempilo zishintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi? - Isixazululo se
Izidingo zokudla okunempilo zishintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi? - Isixazululo se
Kungani izidingo zokudla okunempilo zishintsha ngokukhula?
I-ukugugainqubo ithinta ukumuncwa komzimba okuningiizakhamzimba. Isibonelo, awukwazi ukuncelaizakhamzimbanjenge-calcium. Lokhushintshakwenzeka ngoba njengaweubudalaisisu sakho sikhipha i-hydrochloric acid encane, enganciphisa inani le-calcium emuncu.
Yiziphi izinguquko ezintathu kuzincomo zokudla okunempilo ezenzeka njengoba sikhula?
Ukudlaizidingoshintsha ngokugugangezindlela eziningana:Abantuzingasebenzi kakhulu, imetabolism yazo iyancipha, amandla azo adingekayo, konke lokho kusho ukuthibonangidinga ukudla okuncane.
umfutho wegazi kwabesifazane
Kungani umsoco ezigabeni ezehlukene zokuphila ubalulekile?
Amandla nezakhamzimba kudingaizigaba zokuphila ezahlukenezihlobene, ngokuvamile, nezinguquko emazingeni okukhula (ngaphezulu kwesisindo somzimba ngamunye ngesikhathi sokukhula ngokushesha njengokuzalwa komuntu, ubusha kanye nokukhulelwa). Ngaphambi kokuzalwa, izidlo zomama nezitolo zomzimba zikunikeza konkeizakhamzimba.
Kusukela ngomzuzu wokuzalwa kwethu, siyaguga. Ukuvezwa njalo kwemvelo yethu, izinto esizidlayo, kanye nengcindezi ngaphakathi nangaphandle komzimba wethu kusenza siguge ngokuhamba kwesikhathi. Ukuguga kuyinkimbinkimbi kakhulu, kepha ososayensi baqala ukuqonda ukuthi kwenzekani ezingeni lamangqamuzana namangqamuzana.
Isibonelo, amaseli aphilile ayalimala ngokuhamba kwesikhathi njengoba amasosha ethu omzimba esuka ekuphenduleni ezinkingeni zesikhashana ezifana nokulimala nokutheleleka kuya ekuthuthukiseni kancane kancane ukuvuvukala okungapheli emzimbeni wonke. Isikhathi futhi sinciphisa kancane kancane ama-telomere, asebenza njengama-caps okuvikela ama-chromosomes ethu aqukethe i-DNA. Lezi nezinye izinguquko zenza imizimba yethu inciphe futhi ingakwazi ukubhekana nengcindezi yangaphakathi nangaphandle, ngakho-ke uma umonakalo ufinyelela emazingeni abucayi, amaseli ethu, izicubu zethu kanye nezitho zethu zingase zingabe zisasebenza ngokujwayelekile. nempilo yethu iqala ukonakala.
Izinguquko ezihambisana nokuguga ziqala ezingeni elithile kusukela osukwini lokuqala. Siqala ukuzwa imiphumela yaso zisencane njengoba intsha ilahlekelwa ikhono lokuzwa imisindo ethile yemvamisa ephezulu, ukuqonda kwethu nenkumbulo yehla kancane ngemuva kokuqina phakathi kweminyaka yethu yama-20, amandla amathambo ethu aqala ukwehla ngama-30, ukuzala kwabesifazane kuyehla ngokucijile ngemuva kweminyaka engama-35, ehlobene nobudala. Amehlo aqala maphakathi no-40s wethu, futhi izinwele zethu ziqala ukuba mpunga futhi zibe mncane ngeminyaka engama-30 nengama-40.
Kusukela eminyakeni yobudala engama-50 kuya phambili, izinguquko ekugugeni ziya ngokuya ziqapheleka, futhi njengoba ukuguga kuyimbangela enkulu kakhulu yobungozi ezifweni eziningi ezisithinta njengabantu abadala, lapho sikhula, inkulu ingozi yethu yokuba nezifo ezingamahlalakhona, kuyilapho ososayensi abakatholi izindlela zokumisa lezi zinqubo zokuguga, bafunda okuningi nangaphezulu ngokuthi ungahlala kanjani uphilile impilo yakho yonke. Ezinye izici zokuguga zingaphezu kwamandla ethu - njengezakhi zofuzo kanye nomlando womndeni - kepha singafunda ngezinto ezinobungozi futhi senze konke okusemandleni ethu ukuzinciphisa ngendlela yokuphila enempilo nokudla. Abaningi bethu bangaba nempilo futhi basebenze kahle kuze kube sebekhulile uma sizinakekela.
Akumangazi ukuthi ukuvivinya umzimba njalo kungasiza ukugcina isisindo esinempilo, ukuthuthukisa imizwa nemikhuba yokulala, nokuthuthukisa impilo yonke. Futhi kusobala ukuthi ukudla okunomsoco kungukudla okuphelele noma okunomsoco okubalulekile empilweni enhle. Kepha uma kukhulunywa ngokuqonda ukuthi yikuphi ukudla okuyizinqumo ezingcono kakhulu, ucwaningo oluningi lokudla okunempilo seluqale ukugxila ekutheni ukudla okuthile noma izakhamzimba kungayilimaza kanjani impilo, noma kubambe iqhaza ekuthuthukiseni izifo, futhi sekuqalile Ukuqonda ukuthi ukudla kungadlala kanjani indima ekukhuthazeni ukuguga okunempilo kuzo zonke izigaba zokuphila.
Sifunda ngokushesha ukuthi yikuphi ukudla nezakhamzimba okufanele kuqokonyiswe ekudleni kwethu nokuthi kungayithuthukisa kanjani impilo yethu. Imifino, okusanhlamvu okuphelele, okusanhlamvu, amantongomane, nenyama emuncu kunezinzuzo ezifakazelwe zezempilo ezinjengokwehlisa umfutho wegazi, ukwenza ngcono ukulawulwa kweglucose kwesifo sikashukela, ukwehla kwesisindo, ukuthuthukisa i-Arthritis kanye nokuNciphisa Sifunda kabanzi ngezakhamzimba ezithile ezingathinta impilo. Isibonelo, tshala izingulube ngezithelo ezikhanyayo eziwolintshi nezibomvu nemifino kungavimbela futhi kunciphise ukuqhubeka kwezifo zamehlo.
I-calcium isiza ukugcina amathambo eqinile. Amavithamini B adlala indima ekugcineni impilo yobuchopho. Futhi ama-flavanoid avela ezitshalweni eziningi angenza Ukuthuthukisa impilo yesistimu yethu yenhliziyo.
Okusemqoka wukuthi UNAMANDLA okugcina nokuthuthukisa impilo yakho nokuletha amandla empilweni nokunciphisa ubungozi bokuthola izifo. Futhi akukaze kwephuze kakhulu ukushintsha noma yini. Ukuze ufunde kabanzi ngezakhamzimba ezibalulekile empilweni yakho nokuthi ungashintshela kanjani ngokuphephile kokungezelelwe ekudleni uma ungazitholi ngokwanele lezi zakhi ekudleni kwakho, vakashela i-Healthy Aging With Nutrition ku www.agingresearch.org/nutrition.
Yiziphi izidingo zomsoco ezithintekayo?
Izici zebhayoloji zifaka iminyaka, ubulili, ukukhula, izifo zezifo, nokwakheka kofuzo. Phakathi kwezinto ezingezona ezemvelo, isimo senhlalo-mnotho yiso esibaluleke kakhulu. Ubumpofu bungezinye zezimbangela ezinkulu zenhlalo nezomnotho zokwehluka kweizakhamzimbaukungena, futhi kunomthelelaizidingo zomsoco.04.12.2011
Yiziphi izidingo zokudla okunempilo?
Yiziphi izidingo zokudla okunempilo? Inani ngalinyeizakhamzimbaokudingekayo emzimbeni womuntu kubizwa nge-imfuneko yokudla okunempilo. Lokhu kwehlukile ngakunyeizakhamzimbafuthi ziyahlukahluka phakathi kwabantu nezigaba zokuphila.
Yiziphi izidingo zokudla okunempilo ngesikhathi somjikelezo wempilo?
Sidinga ama-amino acid abalulekile, ama-carbohydrate, ama-fatty acid abalulekile, kanye nohlu lwamavithamini namaminerali okufanele sisimamiseimpilofuthiimpilo.
Kubaluleke nini ukudla okunempilo empilweni?
Ukudla okunempilo kulo lonkeimpiloikhuthaza imiphumela yokukhulelwa enempilo, isekela ukukhula okujwayelekile, ukukhula kanye nokuguga, isiza ukugcina isisindo somzimba esinempilo, futhi inciphisa ubungozi besifo esingelapheki esiholela empilweni nasenhlalakahleni ephelele.
Imigwaqo yebhayisikili imephu dc
Yiziphi izici izidingo zamandla nezakhamzimba ezincike kuzo?
Izidingo zamandlazihlobene nobudala, ubulili, usayizi womzimba nezinga lomsebenzi.Izidingo zamandlazivame ukwanda kuze kufike eminyakeni eyi-15-18. Ngokwesilinganiso, abafana banokuphakama okuncaneizidingokunamantombazane futhi lokhu kuqhubeka phakathi nokuba mdala.
Buyini ubudlelwane phakathi komjikelezo wempilo nokondleka?
Ukushintsha Izidingo futhiUkudla okunomsoco
Ukudla okunempiloizidingo ziyaqhubekaukushintsha esigabeni ngasinyewempilo. Kubalulekileukulungisa i-ukudlanokusebenza ngokomzimbaukuukuhlangabezana nalezi zidingo ezishintshayo futhi uqinisekise impilo nokuphila kahle kuyo yonke indawo yakhoimpilo.
Kuyini umsoco futhi kungani kubalulekile?
Ukudla okunomsocoibuye igxile ekutheni abantu bangazisebenzisa kanjani izindlela zokudla ukunciphisa ubungozi besifo, kwenzakalani uma umuntu enezinto eziningi kakhulu nomaizakhamzimba, nokuthi ukungezwani komzimba kusebenza kanjani.Izakhamzimbanikeza ngokudla. Amaprotheni, ama-carbohydrate, amafutha, amavithamini, amaminerali, i-fiber namanzi konkeizakhamzimba.
Ngabe inani lama-calories adingekayo lishintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi?
Inani lamakhalori adingekayo landa esikhathini sokuphila komuntu. Inani lamakhalori adingekayo linyuka kusukela ebuntwaneni liye ekubeni mdala. Inani lama-calories adingekayo lenyuka kusuka ekubeni mdala kuze kube semdala. Inani lamakhalori adingekayo lihlala lilingana kusukela ebudaleni obudala phakathi nobudala.
Izidingo zokudla okunempilo zishintsha kanjani njengoba sikhula?
Ezinye zezinguquko zomzimba eziphawuleka kakhulu kubantu abadala asebekhulile ezithinta izidingo zabo zokudla okunempilo zifaka phakathi: i-metabolism ehamba kancane i-2, ukuncipha kokudla okungu-3, ​​isisindo somzimba esinciphile kancane 4 ukuncipha kwamathambo 5 malabsorption wevithamini B-12.6 kwehle inani lamahlumela wokunambitha
Ngabe izincomo zokudla zishintshe kanjani ngokuhamba kwesikhathi?
Njengoba isizinda solwazi mayelana nokudla okunempilo sikhule ngaphezu kwekhulu leminyaka, izincomo zokudla ziye zavela ukuze zihambisane nakho konke okutholakele okusha kanye nokushintsha kwamaphethini ekusetshenzisweni kokudla kanye nasekusebenzeni komzimba.
ukusikisela ukubuyekeza kwe-savant mips
Ukubuyekezwa kweGiro savant mips - umhlahlandlela wokugcina
Ngabe uGiro Savant unama-MIP? IGiro Savant MIPS ikunikeza ubuchwepheshe be-MIPS nesisindo esikahle kusigqoko sokuvikela ukonga. Kepha ukuphuma komoya akukuhle njengabanye abancintisana nabo futhi imichilo ibanzi futhi iqine.
ukubuyekezwa kwebhayisikili eyi-hybrid
Ukubuyekezwa kwebhayisikili ye-Hybrid - izixazululo ezihlala njalo
Yiliphi ibhayisikili elihamba phambili kakhulu lemali? Amabhayisikili ama-hybrid amahle kakhuluCannondale Quick 4. Giant ToughRoad SLR 2. Cannondale Bad Boy Alfine 8. Cannondale Treadwell. Okukhethekile iSirrus 2.0. I-Octane Kode Commuter. IBombtrack Vuka Uzilungiselele. BMC Alpenchallenge 01 One. Ukugibela njengebhayisikili lomgwaqo, kubukeka njenge-hybrid kusuka esikhathini esizayo.
Ukubuyekezwa kokuhlolwa kwenhliziyo ye-wahoo
Ukubuyekezwa kwesilinganiso senhliziyo ye-Wahoo - isisombululo esisebenzayo
Ingabe ukuqapha kokushaya kwenhliziyo kweWahoo kunembile? Ukunemba kwe-Wahoo Tickr Noma yikuphi ukuqapha kokushaya kwenhliziyo kuhle kuphela njengedatha enikezayo. Ngenkathi iTickr ingalokothi ilahle isignali ngenkathi ngiyisebenzisa, yenze umugqa oyisicaba izikhathi ezimbalwa. Ikhombise i-HR engu-116 imizuzu engaphezudlwana kwemibili, ingafani neze naleso sikhathi.
ukubuyekeza kwesikhulumi se-tifosi
Ukubuyekezwa kwesikhulumi setifosi - izixazululo eziqinile
Ingabe i-tifosi iluhlobo oluhle? Kwezingilazi ebangeni lama- $ 25- $ 50, ulayini weTifosi ungumenzi omuhle onenani elikhulu uma uqhathaniswa nama-Oakleys aphezulu kanye neminye imikhiqizo yamagama. 2020.
umjaho wezwekazi 28 ukubuyekezwa kwamathambo
Ukubuyekezwa kwe-Continental race 28 tube - incwajana ebanzi
Ngabe amashubhu angaphakathi ezwekazi ahle? Okudumile okuyisihlanu: amashubhu angaphakathi angcono kakhulu ongawathenga ngo-20201 Ukuze kube ngokulingana, amashubhu anentengo emaphakathi asuka kokuthandwa yi-Michelin, Continental, Schwalbe, Specialised, Hutchinson at al onke ahloniphekile.
izibuyekezo zebhayisikili ze-cyclocross 2016
Ukubuyekezwa kwebhayisikili ye-cyclocross 2016 - izimpendulo ezijwayelekile nemibuzo
Ingabe amabhayisikili e-cyclocross akulungele ukugibela umgwaqo? Kukho konke ukungathí sina nokho, kwamukeleka ngokuphelele ukugibela ibhayisikili lakho le-cyclocross njengebhayisikili lomgwaqo futhi usebenzise nje isondo lamasondo elinamasondo amancane emigwaqo. Kubuye kukuhle ngokuphelele ukugibela nje emgwaqweni ngamathayi namasondo ebanzi osuvele unawo.